Diffuser vs Candle ： Eziokwu Don't Na-amaghị - Ma Kwesịrị | Aromaeasy
Ihe na February 7, 2020 Nwere ike 30, 2020 by Aromaeasy
Diffuser na kandụl
Dika mmanu ndi di nkpa di ka ihe di egwu ma di egwu, ogba aghara banyere ahia ha na abawanye.
N’ezie, mmanụ dị mkpa na-esi isi ọma, mana enwere m ike nweta otu mmetụta ahụ naanị site n’ọkụ na-ere kandụl? Obi abụọ a emeela ka ọtụtụ ndị na - azụ ahịa na-eche ma ọ ka mma iji kandụl ma ọ bụ na mmanụ dị mkpa n’ichepụta nkụ.
Ọ bụrụ n’inweta isi na-atọ ụtọ bụ naanị ihe ị chọrọ, kandụl bụ nhọrọ nhọrọ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo ọgwụgwọ aromatherapy na ibi ndụ dị mma, diffuser na-emeri asọmpi ahụ n'ezie. Uru dị na ya site na ịsasị mmanụ dị mkpa dị ọtụtụ ma bụrụ ihe dị mkpa na-agaghị eleghara.
Ọtụtụ mgbe, kandụl adịghị arụ ọrụ dị ka diffusers ma ọlị. Eziokwu ahụ bụ na ọkụ na-enwu gbaa dị oke egwu n’ọkụ n’abalị niile, nke na-eme kandụl ka ọ bụrụ nhọrọ dị ize ndụ nye ndị chọrọ ịnụ ụtọ uru aromatherapy. mgbe m na-ehi ụra. Na nkenke, maka ndị mmadụ na - echigharịkwịma ọgwụ iji gwaa ọgwụ narcolepsy na nsogbu ndị ọzọ metụtara ụra, onye na - agbanwe ya bụ usoro a na - agaghị agbanwe agbanwe.
Maka ụlọ nwere anu ulo ma ọ bụ umuaka, iji kandụl na-esi ísì ụtọ nwere ike ịdị ize ndụ. Na mgbakwunye na nchegbu ndị a na-apụghị izere ezere banyere ọkụ na-emeghe, a na-enwe nchegbu banyere waks dị ọkụ na iko agbajiri agbaji ma ọ bụrụ na a ga-amụnye kandụl ahụ.
Gini mere ị ga - anwale ụzọ ọzọ na - abụghị ọkụ na nchekwa karịa iji mezuo ụlọ gị na - esi ísì ụtọ?
Imirikiti ndị na-eme ihe ọkụ anaghị achọ ụdị okpomoku ọ bụla iji chụpụ mmanụ okpukpo ahụ n'ime ụlọ ahụ. Enweghị ire ọkụ, enweghị ọkụ ọkụ, ma ọ nweghị ihe egwu dị.
Ọzọkwa, ị nwere ike idobe ha na tebụl dị n'akụkụ, windill n'ime ụlọ ọ bụla na-enweghị nchegbu banyere ịkụ ihe.
Ebere eke sitere na kemịkalị kemịkal
Kedu ka ọkụ gị dị?
Nke a na-ewetara anyị nsogbu bụ isi nke kandụl na kandụl.
Dị ka ọtụtụ kandụl na-emepụta ihe na-esi ísì ụtọ ndị yiri ihe ndị sitere n'okike, ha enweghị uru nke ngwaahịa sitere n'okike.
Na mgbakwunye, ọmụmụ egosila na ikpughe anwụrụ ọkụ nwere ike ibutere gị ahụike. A na-eme ọtụtụ kandụl site na paraffin, nke bụ ngwaahịa sitere na mmanụ dị ka rọba, rọba, asphalt, na ọtụtụ kemịkalụ ụlọ. Mgbe a na-agba ọkụ, ọkụ na-emepụta site na paraffin yiri anwụrụ ọkụ n'ihi na ha abụọ nwere benzene na toluene, bụ nke carcinogens a ma ama. Posurekparị anụ ahụ ndị a nwere ike ibute nsogbu ahụike dị iche iche.
Go na-aga mgbatị ahụ mgbe niile. Na-eri ike. And ị na-ekwusi ike na atụmatụ ahụike gị. Ma mgbe ọkụ oriọna ahụ mere, mgbalị ndị ahụ niile nwere ike ịbụ n'efu.
Ihe ndị a bụ eziokwu nke ndị na-enye kandụl na-esi ísì ụtọ agaghị ekwu maka ya.
Ekwela ka aghụghọ were gị.
Dịka ụzọ kachasị mma maka kandụl na-esi ísì ụtọ, mmanụ mgbasa anaghị eme ka anwụrụ ọkụ dị, yabụ, ọ gaghị afụ ụfụ gị. Ọzọkwa, dị ka eji akụrụngwa sitere n'okike nkịtị, mmanụ dị mkpa iji mee ka ọ ghara ịgbanye nsí dị ka kandụl na-esi ísì ụtọ.
Onye na-enye mmanụ dị n’ọkụ na-ewelite ngwakọta nke mmiri ọsụsọ, ọfụma iji mee ka obi dajụọ mmụọ gị. Naanị mgbe ụfọdụ ọ ga-eji mmiri juputara na mmiri gbajie ya na obere mmanụ.
Ọ bụrụ na ị na-eche maka ibi ndụ dị mma, nhọrọ dị mma doro anya.
N'oge ndị ahịa nwere ike ịzụta kandụl na lavender, Mint ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị mkpa mmanụ. Agbanyeghị, n'adịghị ka mmanụ ndị dị mkpa, ọ nweghị oriọna nwere ike ikwu na ejiri ya mee ihe niile. Ọbụlagodi na ịnwere kandụl nke nwere mmanụ dị mkpa na waks, ọnụọgụ mmanụ dị mkpa nwere ike ọ gaghị ezu iji nye uru ọ bụla dị iche iche na-esi ísì ụtọ.
Enwere eziokwu ọzọ na ọ siri ezigbo ike ịchịkwa oge ma ọ bụ ncha nke isi nke sitere na kandụl ahụ wepụtara.
Otu ngwaahịa mmanụ dị 100% dị mkpa (naanị otu ị kwesịrị iji) chọrọ ọtụtụ ihe ọkụkụ mbụ mgbe ị na-emepụta ya. Dabere n’ụdị mmanụ dị mkpa, ime otu paụnd mmanụ nwere ike ịdụta narị narị ma ọ bụ puku kwuru puku osisi. Distzọ ndọghachi mmiri a dị oke ọnụ ma dị oke ọnụ dị mkpa. Ọ bụ n'ihi na aromatherapy dị irè na-adabere na ngwakọta bara uru na mmanụ ndị dị mkpa, bụ nke na-adịghị arụ ọrụ mgbe etinyere ya.
Odide ịnọgidesi ike
Mgbe waksị agbazeze, a na-awụba uda na ngwakọta sịntetik n’ime ụlọ gị, na -epụta nnukwu isi na nnukwu isi ma debe nnukwu ebe.
Ma isi nke kandụl anaghị adị ogologo oge, ọ ga-agbasa na gburugburu gburugburu.
Na mbọ iji dozie nsogbu nke kandụl enweghị ike ịgwọ, mmanụ dị mkpa n’esepụta esi ísì nwayọ nwayọ nwayọ. Ihe si na ya pụta bụ isi na-acha ọkụ nke na-eme ka ime ụlọ pere mpe jupụta, mana isi ya na-anọ ọtụtụ ọnwa n'ihi mmụba isi na-aga n'ihu.
N'ezie echekwa na-eche akụ na ụba
Want chọrọ ka ụlọ gị ma ọ bụ ụlọ gị jupụta na-esi ísì ụtọ na-adọrọ mmasị, ma chekwaa obere akpa gị?
Ọ bụrụ na ị na-eji kandụl, ị ga-amatarịrị ugboro ole ọ ga-eji dochie kandụl ahụ - kwa awa iri anọ ọ bụla. Ndị na-eme kandụl ga-ewepụkwa nsị mgbe ọ bụla ozugbo kandụl agbazewo.
N'aka nke ozo, diffusers enwere oke onu ahia ma enwere ike iji ya ruo mgbe ebighi ebi. Nwere ike jujupụta onye na-ekpocha gị na karama mmanụ dị mkpa n’oge ọ bụla. Karama mmanụ ndị a nwere ogologo ndụ nke kandụl ugboro atọ.
Ọzọkwa, ọtụtụ ọghọm ndị na –emebi ihe na-etinye ngụ oge na-enye gị ohere ijikwa oge nke mgbasa ahụ. N'ihi ya ị ga-eripị mmanụ dị mkpa n ’ọhụụ ma jiri amamihe dịka atụmatụ gị si dị.
Echiche na kandụl dị ọnụ ala karịa mmanụ dị mkpa na ndị na-enye ihe n ’ọhụụ sitere na enweghị ọhụụ dị anya. Onye na-eme ihe ngosi na-anọchite anya itinye ego n'otu oge, ebe a ga-azụrịrị kandụl ozugbo ozugbo kandụl ochie agbazechara. Mgbe ị na-atụle ọnụ ahịa kandụl tojupụtara ogologo oge, ịchekwa obere ego na obere oge agaghị adị mma.
Nke a blog na-atụnyere diffusers na kandụl adịghị ezube ime kandụl ma ọ bụ ndị na-amasị kandụl.
N'ezie onye diffuser enweghị ike ọfụma na edemede ole na ole.
Nke mbu, ha choro eletrik oku dika ihe di n’uwa niile. Nke a na-abawanye ụgwọ ọrụ ha ma belata ike ha n’enweghị ike.
Na mgbakwunye, ụfọdụ ụdị anaghị arụ ọrụ nke ọma na oghere ndị buru ibu; if choro i juju ebe sara mbara na uda nke mmanu di nkpa. Na mmechi, ekwesiri iburu n'uche na diffuser dị oke ọnụ karịa kandụl n'oge dị mkpirikpi.
Ọzọkwa, eziokwu ahụ bụ na ha adịghị ewu ewu dị ka kandụl na-esi ísì ụtọ nwere ike ime ka o sie ike ịchọta mmanụ ịchọrọ.
Agbanyeghị, adịghị ike ndị a ezughi imebi eziokwu ahụ dị mkpa na mmanụ dị mkpa na onye na-enye ihe nkesa bụ ihe doro anya bụ ngwa aromatherapy dị elu. Ọtụtụ nyocha egosila uru nke mmanụ ndị dị mkpa, sitere na imeziwanye ụra ụra ruo n'ibelata nchekasị, na idozi nsogbu nri ma kwụsị ịda mbà n'obi. E jiri ya na kandụl ndị nwere oge ochie, ndị na-enye ihe nchekwa nwere ihe na-echekwa eche, na-echekwa akụ na ụba karịa, na -eme ihe karịa ma na-adịkwa mma. Ọ bụrụ n’inwe ike ịnụ ụtọ ntụsara ahụ na ntụsara ahụ, zụrụ onwe gị onye na-ahụ maka mmanụ dị mkpa.
Nke ahụ kwuru, uru ọ bara na mmanụ dị mkpa ndị mgbasa mgbasa chụsasịrị karịrị nke ndị kandụl na-enye. Ọ bụrụ na ị na-achọ onye na-enye ụlọ maka ọfịs gị ma ọ bụ ọfịs gị, anyị na-akpọ gị òkù ka ị lee anya n'ụdị ụdị dị ọnụ ala anyị dị ọnụ. Helpchọrọ enyemaka ịhọrọ nke ziri ezi mgbasa? Blọọgụ anyị ndị ọzọ ga - enyere gị aka n'ajụjụ ọ bụla ị nwere banyere diffusers ma ọ bụ mmanụ dị mkpa.